မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ကွန်ပျုတာရှိသူတိုင်းသိထားဖတ်ထားသင့်တဲ့ ပြသနာဖြေရှင်းနည်းစာအုပ်
ဘာလို့ရှိထားသိထားသင့်လဲဆိုတော့ အတော်လေးစုံလင်တဲ့စာအုပ် ပညာ
အတော်လေးရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်နေလို့ ပါ ကွန်ပျုတာမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာ
ပေါင်းစုံကို အမေးအဖြေလုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုက်ဆိုင်လို့ 
ကိုယ့်ကွန်ပျုတာမှာဖြစ်တဲ့ ပြဿနာကြုံရင် တခါထဲ ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်မှာပါ
Excel , Word , Pagemaker, Photoshop, MP3, Internet ဆိုင်ရာကအစ
အမေးအဖြေနဲ့အပြည့်စုံဖြေရှင်းဖို့လုပ်ထားတော့ တစ်အုပ်ထဲနဲ့ဗဟုသုတ
တွေ အများကြီးရတဲ့အပြင် Window install လုပ်နည်းတွေနဲ့Photoshop
အင်စတော လုပ်နည်းတွေပါ သေချာ ပြထားပါတယ် ။ အခြေခံပညာသင်တွေ
အနေနဲ့ ကတော့ တန်းဖိုးဖြတ်မရတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
Download ယူရန် ကွန်ပျုတာပြဿနာဖြေရှင်းနည်းအမေးအဖြေစာအုပ်
Author Anonymous at 1:07:00 PM
သိခြင်တာလေး မေးပါရစေ ကိုမောင်ရေ ဒီ ကွန်ပျူတာ ပြဿနာမေးဖြေ စာအုပ်လေးက အင်္ဂလိပ် လိုလား မြန်မာလိုလားဆိုတာလေး မသိလိုပါ ကျေဇူးပြုရ်ျ တချက်လောက်ဖြေပေးပါလားဗျာ
ကိုအနောက်မန့် ရေ မြန်မာလိုရေးထားတာပါ ဖတ်ရတာအရမ်းအကျိူးထူးလို့ ဖတ်စေချင်ကြောင်းဖော်ပြထားတာပါဗျာ.လာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်
ကျေးဇုးူပါပဲ ကိုမောင်ရေ ခုလို စေတနာ ထားပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ရထားတဲ့ ဒဏ်ရာလေး အမြန်ပြောက်ပါစေ ဥုံဖွ ဥုံဖွ တိန်.............
thank အများကြီး တင်ပါတယ်......
Thank u too much,i study now too late,one decade.
thank တော် တော် ကောင်းပါတယ်
zaw lin mg said...
thaw tar said...
ကျေးဇူးအများကြီးတယ် ကိုမောင်ရေ အစ်ကိုဆီလာရတာ ဗဟုသုတတွေများကြီးရတာပဲဗျာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုမှ မသိတဲ့လူတွေတောင်
အစ်ကို့ဆီလာလည်ရင်းနဲ့ သိလာပြီ ကျေးဇူး
http://minus.com/l9a48PE6PFny5 အဲ့လင့်မှာတင်တာပါ Khun ရေ.
လင့်ကတော့ အခုပဲစစ်လိုက်တယ် ကောင်းနေသေးတယ်နော် 30/1/2013
thank အများကြီး တင်ပါတယ်.
ကျွန်တော့်ကို epson me office 1100 resetter တင်ပေးပါအုံး၊ ကျွန်တော်printer ဆိုဒ်တွေထဲလိုက်ရှာတာပိတ်ထားတာပဲတွေ့ကို၊ ကူညီပါအုံး
kyaw kyaw said...
zinmin aung said...